Umbhalo - Agasti 14-18, 1969
Kwakungekho bhulogi, akukho miyalezo yombhalo, akukho Tweets okanye imilayezo esheshayo emva kowe-1969. Kodwa ukuba bekukho, imbali yeziganeko zeveki zeTemstostock zenzeke into enje.
8/14/69 - Usuku olungaphambi komhla 1
Ifoto nguDerek Redmond noPaul Campbell, abanelayisenisi phantsi kweGNU Free Document License
Ukwakhiwa kwesigaba sokugqibela kunye nokusetyenzwa kwenkqubo yesandi kuyaqhubeka.
Nangona umthendeleko ungaqali ukusa ngomso, uqikelelwa ukuba abantu abangama-50,000 sele befikile kwindawo yomthendeleko baze bamise inkampu.
Amakhulu amawaka angaphezulu asemasendleleni - iziteshi zomsakazo kude kude neNew York City zisasazwa ngezihlandlo eziqhelekileyo zokukhula kweemoto zendlela.
Abemi beli dolophu elisondeleyo, eBethel, baxhatshazwa ukuba amagosa asezidolophini avumela ukuba "i-hippies" ihlasele phezu kwabo, yenze iibhloko zendlela zomntu ngaphaya kwendlela eya eMfama waseMax Yasgur, apho kugcinwe khona umthendeleko. Abaqhubi bemikhosi bahamba nje bahambe baze bahambe ngendlela epheleleyo.
8/15/69 - Vumela umthendeleko uqale
UJoan Baez, isithombe © Henry Diltz, inceba yeRino Entertainment
Kuyo yonke imini, i-gridlock ilawula zonke iindlela ezikhokelela kwindawo yekhonsathi kufuphi neBheteli, eNew York. Ekugqibeleni, ii-helicopter zeSizwe zoLondolozo ziya kusetshenziselwa ukuhamba ngesiqhumane kubadlali abangakwazi ukufikelela kwindawo leyo nayiphi na enye indlela.
Ukutya ngokubambisana kwimihlaba, esele ichithwe ngokugqithiseleyo ngama-50,000 abafikelele kwiveki, ngokukhawuleza iphela. Abaqhubi bekhontrakthi benza ntoni nento abaye bazisa nabo, okanye banokufumana kwiivenkile zeefetri zeevenkile kunye neevenkile. Kwiindawo zomthendeleko, abo banokudla kunye namanzi babelana nabo nabangenayo.
Ngomso mva, akukho nanye yezenzo zokuqala ezine eziye zacwangciswa ukukhupha umthendeleko wakwazi ukuzenza kwisiza. Yawa eRichie Havens , eyayiqala kwisihlanu kwilwayo, ukuvula umthendeleko. Wathatha isigaba ngo-5: 00 ntambama waza wadlala kwiindawo eziphindaphindiweyo zokubamba iqela elingcono leeyure ezintathu.
Iindawo zalandelwa (ngokulandelelana) yi-Sweetwater, Incredible String Band, uBert Sommer, uTim Hardin, uRavi Shankar, uMelanie, uAlolo Guthrie kunye noJoan Baez, abathatha isigaba malunga ne-1: 00 ekuseni ukuvala imihla yokuqala.
Ngeliphakathi kobusuku, kwaqala ukuna, phakathi kweSikankar. Waqhubeka naphezu kwemvula kodwa ekugqibeleni wayeka emva kweengoma ezihlanu. Imvula iya kuqhubeka iwa kunye nokuqhubeka kuyo yonke loo mcimbi, ukudala ulwandle olumdaka kunye nokuphazamisa okanye ukulibaziseka imisebenzi emininzi.
Kulo busuku, ukuhamba kwabantu abantu kwiSafama saseYasgur kwaqhubeka kungabikho.
8/16/69 - Usuku lwe-Woodstock 2
I-Creedence Clearwater Revival, isithombe © Henry Diltz, inceba yeRino Entertainment
Ithenda yonyango isetyenziselwa ukuphatha iinyawo ezingenazinqamlekileyo ezityulwe ngeglasi ephukileyo kunye nesinyithi ezinokuthi zihlambele indawo, iindidi ezimbi ze-acid, kunye ne-retinas zitshiswe xa abanike ngamatye balala phantsi baze bajonge ngqo elangeni.
Indoda eselula, elele kwindawo yocala, efihliweyo phantsi kwesibhulo sakhe sokulala ukukhuselwa kwimvula, ifa xa iqhutywe ngengozi ngetrektare ekhupha iindwangu zamanzi kwiindawo zangasese eziphathekayo.
KwiBheteli efuphileyo, amavolontiya aqala ukwenza amawaka eentlabathi ezithunyelwa nge-helicopter kwisiza ukutya abantu abaninzi abalambileyo. ICandelo lezoBulungisa baseKapa lithatha inkundla egumbini lakhe lokuhlala ukuze lijongane namacala angama-200 anxulumene neziyobisi.
Imiboniso yosuku lomthendeleko, okokuqala ukucwangciswa ukuqala ngokuhlwa, ukuqala kungekudala emva kwemini ukuze isihlwele singabi siphephelo kwaye singabi myalelo. Abaculi bacelwa ukuba bandise iiseti zabo.
Ukuthatha isigaba namhlanje: Qalisa, uKeef Hartley Band , "Country Joe" McDonald, uJohn Sebastian, Santana , Ukufudumala okuNgciniweyo , Intaba, Uvuyo oluvayo, UCededence u-Clearwater Revival, uJanis Joplin , uSly kunye noLwabi lweNtsapho, Lowo kunye noJefferson Airplane.
Iingxaki zobuchwepheshe zithintela ukusebenza kukaQuill ekubeni kufakwe kwi- Woodstock (i-movie) ebangela ukuba iAtlantic Records ilahle. Iingxaki zombane kunye namanzi angamazinyo angamaqhosha kwinqanaba elibangela isizathu sokubonga Abafileyo bayothuka xa bechaphazela ii-microphone zabo kunye nezixhobo zegitala zombane.
Kuyo yonke imihla, ukulibaziseka kwemvula kunye nezobuchwephesha kuphazamisa isimiso somthendeleko: Owagqiba isethi yawo njengoko ilanga liphuma ngeCawa ekuseni, kwaye liphantse ngo-8: 00 ngeCawa ngo-Agasti ebusuku, uJefferson Airplane ekugqibeleni uqala ukudlala.
8/17/69 - Usuku lwesithathu, ubusuku ukuya kusasa
Crosby Stills & Nash, isithombe © Henry Diltz, ububele bukaRino Entertainment
Iimviwo zaseMigqibelo zasebusuku azizange ziphele ngeCawa nge-ntsasa, ngoko kwakukho isikhala esincinane phakathi kukaJefferson Airplane kunye noJoe Cocker, othabatha isiteji ngo-2: 00 ntambama ngamafu esiphepho.
Emva kokusekwa kweCocker, kukho ukulibaziseka kweeyure ezimbini, emva koko ukulungiswa komhla kuqhubeka ngo-6: 00: Izwe likaJoe kunye neNtlanzi, iminyaka elishumi emva koko, i-Band, uJohnny ubusika, uCrosby Nash & Young , uPaul Butterfield Blues Band , USha-Na-Na, noJimi Hendrix.
U-Neil Young, edlala okokuqala ngqa ne-CSNY yenza iingoma ezimbini kuphela kwisethi ye-acoustic yebhanti kwaye wenqatshelwe ukuba zifakwe ngexesha lokusekwa kombane, zikhalaza ukuba iikhamera ziphazamisa kakhulu.
Kunobuhlungu kangangokuba emva kweminyaka engama-10 ayikwazi ukugcina ii-guitar zazo kwiimvumi. Ukongeza ukuhlambalaza ukulimala, ngenxa yeengxaki zobuchwepheshe, ingoma yokugqibela yebhanki ifakwe.
Ukufa okubini kwababini, kokubili kokugqithisa izidakamizwa, kwenzeka namhlanje. Kukho iintlobo ezine zokuzalwa: ezintathu kwiiklinikhi zesikhokelo esasisungulwe kwisibhedlele sendawo kwisikolo ngaphandle kwendawo yokubhiyozela, yesine kwihostele eBethel eseduze, eyayiyindawo yokuqala ubaba onokuyifumana xa umfazi wakhe iya ekusebenzeni.
8/18/69 - Ngaba iphelile?
UJimi Hendrix, isithombe © Henry Diltz, inceba yeRino Entertainment
Yintoni eyayilungiselelwe njengemihla emithathu (ngoLwesihlanu-ngeCawa, ngo-Agasti 15-17) umthendeleko uqhubeka ngokusa ngoMsombuluko, ngo-Agasti 18 ngenxa yokulibaziseka kwamanzi kunye neentambo zobugcisa.
I-exodus yamanzi iyaqala xa iindudumo zilibaziseka inkqubo (kwakhona kwakhona) malunga ne-5: 00 ntambama ngeCawa. Uqikelelo lwama-35,000 luhlala ekupheleni komsebenzi wokugqibela, oqala ngo-9: 00 ngoMvulo.
Ukukwenza emva kokulibazisa kwemozulu yokugqibela, ukuqala ngo-6: 30 ntambama ngeCawa: Izwe likaJoe kunye neNtlanzi, iminyaka elishumi emva koko, i-Band. Ukuqala malunga nobusuku bobabini, abadlali baseMvulo baquka uJohnny Winter, i-Blood Sweat & Tears, i-CSNY, uPaul Butterfield Blues Band, uSha-Na-Na noJimi Hendrix.
Njengoko umthendeleko usuphelile, uqikelelo lwenani labantu abaya kuzo luyahlukahluka ngokubanzi. Amapolisa aseburhulumenteni anqikelele ngama-450,000, isalathiso sihlala sijikelezwe kwisiqingatha sezigidi. Umhleli wephephandaba kwimeko wathi ininzi yayisondele kuma-150,000, kodwa umbhali-mlando waseBheteli uthi ngokusondeleyo ku-700,000. Ngenxa yokungabikho kwetikiti ezithengisayo kunye nokuqokelela inkqubo, asisoze sazi ngokuqinisekileyo.
Xa beyilungisa yonke into, abaququzeleli bemithendeleko bangabakho i-$ 1.3-yezigidi kwi-matyala, baneendleko ezingaphezu kwama-300% ngaphezu kohlahlo lwabiwo-mali kwaye abaninzi abaye bangena ngaphandle kokuhlawula ithikiti.
Abantu abangaphezu kwama-5,000 babefuna unyango lwezokwelapha ngexesha lomthendeleko. Kuloo nani, malunga nama-800 abandakanya ukusetyenziswa kwezidakamizwa. Kukho iingxelo ezithintekayo zokulahlekelwa ngamathambo.
Kuthatha i-$ 100,000 kunye neentsuku eziliqela ukucoca isayithi. Abasebenzi bahlawula iitoni zeertshi kunye neengcola emgodini bayitshise.
UMSEBENZI Wemibuzo yokuSebenzisa iMathematika
Ii-CD ezi-Top 10 ze-Irish Music Starter
URyan O'Flanagan UngumTyeli oMnandi kakhulu kwiVideos Travel Travel
Imfazwe Yehlabathi II: uLieutenant General James M. Gavin
I-Super Bowl Player Bonus Shares
Indlela Yokuba Ngabafundisi Babahedeni
Cheeseecake Spice Cheese
Ukuqonda i-Cover 2 Zone Defense
(mf) i-mezzo forte
I-ETFE Architecture - Ngaba iPlastiki izayo?
UJohn Jacob Astor